web developement - phpmyanmar.com
If you are going to learn CSS from scratch, you have probably seenalot of techniques, tricks and tutorials so far. Please see below…
CSS လေ့လာသူများဖတ်ရှုသင့်သော websites များ။ Web developer များ အနေဖြင့် CSS (Cascading Style Sheet) အကြောင် သိထား ရန် လိုအပ် ပါသည်။ အောက်ဖေါ်ပြ ပါ websites များသည် css လေ့လာ သူများ အတွက် များစွာ အထောက် အကူ ဖြစ်နိုင် ပါသည်။ Source : http://acomment.net/9-top-css-essential-skills-that-every-web-designer-should-learn 1- Making CSS Layouts Creating CSS Layouts: The Best Tutorials on Converting PSD to XHTML CSS… more....
Posted as - [web developement] [css]
You do not need to beagreat artist to get great looking graphics. In fact, sometimes you do not even have to roll up…
Web Developer တစ်ဦး အတွက် လက်နက်များ။ သင်သည် Web Developer တစ်ဦး ဖြစ် ပါက၊ လိုလျှင် လိုသလို အသုံးပြု နိုင်မည်၊ ကရိယာ တံဆာပလာ များနှင့် အလား တူသော၊ software မျိုးစုံ ကို စုဆောင်း ထားရန် လိုအပ် ပါမည်။ အသုံး ဝင်မည် ထင်သည့် software များကို စုဆောင်း ပြီး အောက်တွင် ဖေါ်ပြ အပ် ပါသည်။ Source - http://mashable.com 256Pixels.com - Presentsadaily favicon contest. Create… more....
Posted as - [web developement] [graphic] [Tools]
Please see belowalist of links to useful PHP articles
PHP လေ့လာ သူများ အတွက် အသုံးဝင် မည့် links များ။ Java, Microsoft .net စသည် တို့တွင်၊ အလွန် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ သော ကုမ္ပဏီ ကြီးများ နောက်ခံ ရှိပြီး၊ ငွေကုန်ခံ ဘေးတီ ပေးနိုင် သဖြင့် နာမည် ကြီးကြ ပါတယ်။ PHP ကတော့ Zend အမည် ရှိ ကုမ္ပဏီ လေး တစ်ခုသာ ရှိ ပါတယ်။ PHP မှာချမ်းသာ တာ တစ်ခု တော့ရှိ ပါတယ်၊ လူချမ်းသာ တာပါ။ ဒါကတော့ သန်းနဲ့ ချီတဲ့… more....
Web Developement လိုက်စါး သူများ သိသင့်သော site တစ်ခု။ Internet ထဲတွင် website ရေးသူ များ သိထား သင်သော website တစ်ခုမှာ http://www.alvit.de/handbook/ ဖြစ် ပါသည်။ အောက်ပါ ခေါငိးစဉ် များဖြင့် ရာနှင့် ချီသော websites links များကို ဖေါ်ပြ ပေးထား ပါသည်။ ၄င်း website တင်ထား သူ web master အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင် ကြောင်း မှတ်တမ်း တင် အပ် ပါသည်။ creativity css: selected showcases css… more....
PHP Links [Same as English version] Essential Links http://www.php.net/ http://www.zend.com/ Tutorials Learning PHP: by Elizabeth Fulghum PHP from the Ground Up: by Tim Ziegler A Short Tutorial Php Manual Installtions easyPhp Wamp5 Html Tutorial w3schools html tutorial Other Useful Links Webmonkey's PHP collection PHP Knowledge Base PHPBuilder http://www.devshed.com/ http://www.hotwired.com/webmonkey/… more....
Processing time -- 0.0286 seconds.